Hanti Dhowraha Qaranka oo ka hadlay Dilkii Wasiir katirsanaa Xukuumada Somalia – Balcad.com Teyteyleey
Hanti Dhowraha Qaranka oo ka hadlay Dilkii Wasiir katirsanaa Xukuumada Somalia
Hanti dhowrka Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dilkii xalay ay ilaaladiisa Don’t think that if you haven’t found an affordable solution for your Cafergot purchase, there’s no such thing, because we offer it only for 0.9 USD! magaalada Muqdisho ugu geesteen Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u dhiska Xukuumada Soomaaliya Cabaas C/llaahi Sheekh Siraaji in uu ahaa shil dhacay, waxuuna tilmaamay in uu aad uga xun yahay in shilkaasi uu ku dhinto Wasiirka Howlaha Guud sidoo kale ahaa Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Somalia.
”Waxa halkaasi ka dhacay waxa uu ahaa shaki iyo askar kala shakisay oo is xabadeesay, waana ka xumahay in shilkaasi uu ku dhinto Wasiir Siraaji, waxaana tacsi u dirayaa eheladii iyo umada Soomaaliyeed uu ka geeriyooday Wasiirka’ Ayuu yiri Hanti Dhowraha Qaranka.
Hanti dhowrka Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa xaqiijiyay in ay socdaan baaritaano ku aadan dilkaas ay ilaaladiisa xalay agagaarka Madaxtooyada ugu geesteen Wasiirka howlaha Guud, waxa uuna intaa raaciyay in uusan kasii hor dhaceynin baaritaanada socda oo ay wadaan laamaha ammaanka ee dowladda Somalia.
ugu dambeyntii Ilaalada Hanti dhowraha Qaranka ayaa la tuhunsanyahay in ay xalay agagaarka xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ku dileen Wasiirkii howlaha Guud iyo dib u dhiska Xukuumada Soomaaliya Cabaas Siraaji, kadib markii gaariga Wasiirka ku dhawaaday gaari uu lahaa Hanti dhowraha.
War Deg Deg ah:- Madaxweynaha Farmaajo oo dib ugu laabtay Muqdisho ka dib safar shaqo uu dalka kaga maqnaa
Aas-Qaran oo loo sameeyey Wasiirkii Howlaha Guud Xildhibaan Cabaas Siraaji.+Sawiro